ဲ့ချယ်ရီပေးတဲ့ရသစုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel »ဲ့ချယ်ရီပေးတဲ့ရသစုံ
Posted by Novy on Sep 12, 2012 in Travel | 33 comments
မနေ့က ရုံးဆင်းတော့ စီးတော်ဂျစ်ဝပ်ရှော့ ရောက်နေလို့
ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ ကားဆရာကိုယ်တော်ချောက တစ်ခြားကားတွေကို ကျော်တာခွတာ
စတော့တာပါပဲ လမ်းပေါ်က လူတွေကိုလည်းတိုက်တော့မလို့ ပွတ်ကာသီကာပေါ့
မနိုကဖြေဖြေမောင်းပါဟယ် အန္တရာယ် များလို့ပါလိုပြောတော့
ကျွန်တော်က ပါရမီကာကြီးတွေမောင်းနေတာ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့တဲ့
ဆက်ပြောပါသေးတယ် ဒီလို့မောင်းတက်အောင် 14နှစ်သားထဲက
ကိုယ်စီးနေတာ ကားလား မြန်နှုန်းမြင့် ရိုလာကိုစတာလားလိုတောင် ပြန်စဉ်စားနေရတယ်
ဒါနဲ့မျက်လုံးပြန်ဖွင့် ပြီး ကားခုံခါးပတ်ပဲ ပတ်ရမလိုလို
ဘေးနားမှာချထားတဲ့ မှောက်နေတဲ့ထမင်းခြင်ပဲ ကိုင်ထားရတော့မလိုလို
ဒါနဲ့ပဲ ရင်တွေကတုံ လာပြီး
ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတာနဲ့ ဘုရားစာတွေပဲရွတ်နေမိတယ်
ဦးထောင်ဘို့အ၀ိုင်းကိုလည်း တန်းစီကာတွေကို မစောင့်ပဲနဲ့
ကားက အရှိန်များလွန်းလို့ အ၀ိုင်းပတ်လမ်းပေါ် မရောက်ပဲနဲ့
ဘရိတ်မပါပဲနဲ့တောင် ကားကို တုံ့ကနဲ ရပ်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့
စိတ်ထဲကတော့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် နင့်ကားက တုံ့ကနဲ ရပ်မှာလား
ဦးထောင်ဘို့ လမ်းပေါ်ရောက်တော့ ကားတွေကျပ်နေတာနဲ့
အရှိန်ရော့သွားတယ် အဲ့ဒီတော့မှ အသက်လေးဝအောင်ပြန်ရှုရတယ်
ဦးဝိစာရ အ၀ိုင်းရောက်တော့ ဦးဝိစာရကွေ့ကြောကို ယူထားပြီ
ကားရပ်လိုက်တော့ မစီးတော့ဘူးလို့ ပြောမယ်တောင်ကြံမိပါတယ်
အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ ရင်တွေတုံ ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ပြီး
ကားလေးကသေးတော့ အရှိန်နဲ့တိုက်မိ ရင်အသက်ရှင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး
အခန့်မသင့်ရင် အသက်ပါပေးလိုက်ရမဲ့ အဖြစ်ပါ
ပြီးတော့ ကားမောင်းကျွမ်းတိုင်း မရမ်းသင့်ပါဘူး
မနေ့ကညနေ 15မိနစ်စာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ရသစုံကို
လက်တုံတုံ ရင်တုံတုံနဲ့ ပြန်လည်ဖေါက်သည်ချလိုက်ပါတယ်
နောက်ကို နှလုံးတုန် ရင်တုန် ထပ်မဖြစ်ရလေအောင်
မနိုအတွက် ဒါရိုက်ဘာအူးကြောင်ကြီးကို လွှတ်လိုက်မယ်နော်
အဲဒီ့အူးကြောင်ကိုတော့ မလွတ်ပါနဲ့ ချည်ထားပါ
သူက ဒါရိုက်ဘာတွေထက် ပိုကြောက်ရတယ် :-)
မိုးစက်ဆိုရင်တော့ ကားရပ်ခိုင်းပြီးတစ်ခြားကားငှားစီးလိုက်မှာ ..
ညိုပြာညက်ဆိုရင်တော့ ကားရပ်ခိုင်းပြီးတစ်ခြားကားငှားစီးလိုက်မှာ ..
ညည်းပဲ အစကတော့ ဖါးသက်ပြင်းဆို….
ရသစုံကို ခံစားကြည့်လိုက်တာလေ ဟီးဟီးးးးး
အင်း တစ်ချို့က အဲ့ဒီလိုပဲ မနိုရေ့
ကျွန်တော်လည်း ဆိုင်ကယ် နောက်က လိုက်တဲ့ အခါ တအားမောင်းရင် စိတ်ဆိုးမိတယ်
အသက်ကို သူတန်ဖိုးမထားပေမယ့် ကိုယ်က တန်ဖိုး ထားရမယ်လေ။
တစ်ချို့ကားသမားတွေက သေမှာလဲမကြောက် ထောင်ကျမှာလဲမကြောက်ဘူး
ဖြစ်လာမှသာ ဒူးပဲပြေဖတ်တော့မလိုလို အ၀တ်ပဲပြေလျှော်ပေးတော့မလိုလိုနဲ့
ဘုရားတနေတဲ့ နိုဗွီကို မြင်မိတယ်…:)
ချယ်ရီကားလေးနဲ့ နေပြည်တော်အထိ အမြန်မောင်းပြီး ကားမှောက်သေသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိဖူးတယ် … ကားမောင်းကြမ်းတတ်တဲ့သူနဲ့ အဲဒီကားသေးသေးလေးနဲ့ ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်ပဲ မှောက်သွားခဲ့တာ …
ကားလေးတွေကသေတော့ အရှိန်နဲ့တိုက်ရင် မှောက်ရင်
အင်း ကားတွေကကြပ် ကားမောင်းသမားတွေက ရမ်း ဘက်စ်ကားတွေက စည်းကမ်းမဲ့…တော်ပြီး မြင်းပဲစီးတော့မယ်..
အင်း မြင်းကို ဘာရောင်လေးဝယ်ရင်ကောင်းမလဲ……………………Think Think Think…
model အမြင့် အော်တို နဖားကြိုးနဲ. မြင်း ၀ယ်မယ်…….. မနိုလို ရင်မတုံရအောင်………. ဟဲဟဲဟဲ
ဟိဟိ ရွှေတိုက်မြင်းဝယ်တော့မယ်ဆိုပါလား ဒါဆို အဆင်ပြေအောင် အကြံပေးလိုက်မယ်နော် မြင်းဝယ်မယ်ဆို ဟိုသိပ်မထွားတဲ့ ပုညှက်ညှက် မြင်းကလေးတစ်ကောင်လောက်ဝယ်နော် ..
ဒါမှ မြင်းကခြေတံမ၇ှည်တော့ တစ်အားမပြေးမှာ …
ဒါဆို မြင်းမဝယ်နဲ့ မြည်းဝယ်
အောဗစ် အမွှားပူးလေး မွေးပါစေတော်… ဟွန်. ဒီအရပ်ပဲ လာလာထိခိုက်နေတယ်.. အရပ်ကို မစော်ကားနဲ.နော် ရယက နဲ. တွေ.မယ့်
ဘာတဲ့ “model အမြင့် အော်တို နဖားကြိုးနဲ. မြင်း” ဟုတ်စ
မနိုအတွက်ပါ တစ်ကောင် ပိုကြည့်ထားလိုက်နော်
ဟုတ်ကဲ့ မနို အစ်မ ဘာရောင်ကြိုက်လဲ ပြော…. ကြိုမှာရမှာမို…. မိုင်းလစ် မများတဲ့ မြင်းရွေးဝယ်ရမှာလေ… ခိခိ
ေ၇ွှတိုက်ရေ မနိုအတွက်ဆိုရင်တော့ ခြေတံရှည်၇ှည်လေးနဲ့ စမတ်ကျတဲ့ မြင်းလေးရွေးပေးလိုက်နော် ..
ခိခိ ပြေးပြီ …
ကိုတိုက်အတွက်… နားရွက်ရှည်ရှည်နဲ့ မြင်းပုပုလေး…၀ယ်ပေးလိုက်မယ်လေ…
တိုက်တိုက်တစ်ယောက် သံချပ်ကာဝတ်စုံကြီးကိုဝတ်၊ မြင်းကြီး (အမျိုးအစား နှင့်အရောင်မသိသေးပါ) ကိုစီး၊ မြို့ထဲမှာ ဒက်ဂလောက် ဒက်ဂလောက်နဲ့၊ လက်စွဲတော် ကြာပွတ်ကြီးဝေ့ရမ်းလို့၊ အရေးကြုံရင် စပိုက်ဒါမန်းလို တွေ့ကရာ တိုက်ပေါ်ပြေးတတ်မယ့် ပုံလေးမြင်ယောင်နေမိတယ်..
မနိုရေ ကံကောင်းလို့ပါလား ။ ဓာတ်ခံမကောင်းတဲ့သူဆို ရှော့ရသွားနိုင်တယ်။
အဲ့ဒီကားသမားလည်း တနေ့တော့ ပြသာနာကြီးကြီး တက်အုန်းတော့မှာပဲ ။ သူ့လို အပြိုင်ကျဲသူနဲ့ တွေ့ရင် ဒုက္ခ။
ချယ်ရီပေးတာကတော်သေးတာပေါ့ ။ နဲနဲ သစ်သေးတော့ ။ တစ်ချို့ တက်စီ ကားဘီးဘဲ ပြုတ်ထွက်မလား ကားတံခါး ဘဲ ပွင့်ကျမလား ပါ ရောပူနေရသေးတာ။ ဒီနေ့ သတင်းစာထဲတော့ ပါရမီ နဲ့ အဓိပတိက တိုင်ကြပါဆိုပြီး ကြော်ငြာ နဲ့ ဖုန်းနံပါတ် တွေ့မိတယ် ။
ဖုန်း ၀၁-၅၇၃၂၅၇ ။ ၀၉၈၆၁၂၁၄၉ ကို ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်ရင် ၊ အရှိန်ပြင်းမောင်းနှင်ခြင်း မဆင်မခြင်ယှဉ်ပြိုင်ကျော်တက်ခြင်း ၊ ရိုင်းပြစွာ ဆက်ဆံခြင်းများ တွေ့ရှိပါက ယာဉ်နံပါတ် ၊ နေ့ ၊ရက် အချိန် နေရာတို့ မှတ်သားပြီးတိုင်နိုင်ပါတယ် တဲ့ ခင်ဗျ။
တိုင်လို့ တကယ်အရေးယူမယ်ဆိုလျှင်တော့ ……. ၀မ်းသာစရာ သတင်းပါပဲ ကထူးဆန်းရယ် … ။
ချယ်ရီကားလေးတွေဂျွမ်းပစ်တာ ၊ တိုက်တာ ခဏခဏ မြင်ဖူးတယ် ။
တချို့ကား သမားတွေများ အရှိန်လျော့ပါပြောလိုက်လျှင် ပိုပြီးမောင်းပြတယ် ။ စကောထဲ ဇီးဖြူသီးထည့်လှိမ့်ခံရသလို …တလမ်းလုံးဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်နဲ့ပေါ့ ။ ကားကြီးတွေရှေ့များ လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းပြီး ခေါင်းသွားထိုးပေးတာလည်း ရှိသေးတယ် ။
နောက်ဆုံးတော့ မောင်းချင်သလောက်သာမောင်း ၊ နင်က မောင်းတဲ့လူ ၊ တိုက်လို့ သေကြေးဆို ရှေ့ကလူအရင်သေမယ် ၊ ငါကအနောက်ကလူ ၊ အတူသေတော့လည်း အဖော်ရတယ်လို့ ရွဲ့ ခဲ့ရတာမျိုးရှိသလို ၊ …. တခါတလေလည်း … ခင်ဗျား ကားမောင်းတာ ကျွမ်းလှချည်လား ၊ ဒီထက်ပိုတင်မောင်းကြည့်ပါဦးလားလို့ ခနဲ့ ပေးရတာမျိုးလည်း ရှိတယ် ။ ကားကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မောင်းနေတဲ့ …. မနိုတောင် ရင်တုံတယ်ဆိုလျှင် တော်ရုံ အမောင်းကြမ်းတာ မဟုတ်ဘူးပဲ … ။
ဒို့ တွေကတော့ အက်ရှင်ကားကို ကြည့်ဘူးတာဘဲရှိတယ်.. ကံကောင်းသူတွေများတော့ ကိုယ်တိုင်အက်ရှင်ရိုက်နေသလိုပေါ့ :-) . ဒီမလေးရှားမှာတော့ အဲ့ဒါမျိုးရှားတယ် ဒါပေမယ့် တက္ကစီဓါးပြတွေတော့ အရမ်းပေါတာ.. အသိတွေ ခဏခဏခံရတယ်..
ပြီးရင် တွေ့ သမျှလူ လိုက်သာပြော
အဲဒီချယ်ရီထဲက တချို့ ကားတွေက နောက်ရှော့ ဗားအထိုင်
က သံ မဟုတ်ဘူး ။ ဖိုက်ဗာ တစ်မျိုးဗျ။သူငယ်ချင်းကားမှာ
တွေ့ ဖူးတာ ။ နောက်များ မစီးနဲ့  ဂျီးတော်ရေ
ရွာထဲကလူတွေ လွမ်းနေရလိမ့် မယ် ။m
ခေါင်းစဉ်လေးတွေ့ပြီးစိတ်ဝင်စားသွားတာ. ကျမလည်းကားငှားရင် သူတို့ကအသစ်လေးတွေဆိုတော့ စီးဖြစ်တယ်. တချို့ကားသမားတွေကတော့စွတ်မောင်းတာလည်းတွေ့ဖူးတယ်. ကျမကတော့သိပ်မကြောက်တတ်တော့တော်သေးတယ်. ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းတတ်တဲ့သူက သူများမောင်းတဲ့ကားစီးရတာကိုသိပ်စိတ်မချရတဲ့ကြား အဲလိုစည်းမဲ့ကမ်းမဲ့မောင်းတော့ ပိုဆိုးသွားပြီပေါ့.
နောက်ဆို မနို လေယာဉ်တွေ ဘာတွေဝယ်စီးရမယ့်ခေတ်ရောက်တော့မှာဆိုတော့ ခုထဲက လေ့ကျင့်ထားတော့ အဆင်သင့်ဖြစ်တာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား..။
ဒီလောက် လမ်းမကောင်းကားကျပ်မှာတောင် ဂျိမ်းစဘွန်းလိုမောင်းရင် နေပူတော်လမ်းတွေမှာဆို အဲဒီလူ နဲ့ အဲဒီ ချယ်ရီ ခရီးဆုံးလိုက်မှာမဟုတ်ဝူး။ ဒွတ်ခ။
ရမ်းကားလွန်းတဲ့ ကားမောင်းသမားတွေကြောင့် ခရီးသည်အများစုက ဘုရားကို တချိန်လုံးတပီး ရသမျှ ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပွားများကြရတယ်… အဲဒီကုသိုလ် ကောင်းမှု အကျိုးဆက်က ကားသမားကြောင့် ဖြစ်လာတာဆိုတော့ကာ… ကားဒရိုင်ဘာတွေသေရင် နတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့တောင် သရော်ကြတယ်လေ…………
မနိုနဲ့ အတူ ချယ်ရီပေးတဲ့ ရသစုံကို
ရွာသူား အပေါင်းကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်
ကပေပြောတာ မှန်တယ်။ နိုဗွီဂလေးကို ဦးကြောင် ကိုယ်တိုင် ရှေ့ခန်းမှာ ထိုင်ခိုင်းပြီး လိုရာကို ကားမောင်းပို့မယ်။ တခုတော့ရှိတယ် ဦးကြောင် ဂီယာထိုးကြမ်းတာတော့ ခွင့်လွှတ်ကွဲ့…။